Home Ulo oru Europe Chris Smalling Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Mike'. Anyị Chris Smalling Childhood akụkọ na akụkọ ndụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, mmekọrịta ndụ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike nchebe ya mana ole na ole na-atụle Chris Smaling's Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Chris Smalling Childhood Akụkọ Plus Ihe Nkọwapụta Eziokwu -Ndụ mbido
[Fll Name] Christopher Lloyd Smalling mụrụ na Ụbọchị 22 nke November 1989 na Greenwich, United Kingdom. Ọchichi a mụrụ Sagittarius A mụrụ ya nne ya, Theresa Smalling na nna, Lloyd Smalling.
Chris bụ onye Jamaica na otu ezinụlọ na-achọsi ike ịkụzi akwụkwọ tupu ha emee egwuregwu. Otú ọ dị, Chris chere mgbe niile na ọ bụrụ na ọ bụ ndị na-agba ọsọ site na otu ụbọchị na ọbụna n'ụlọ akwụkwọ. N'okpuru ebe a bụ Chris, onye dị afọ asatọ, ya na nwanne ya nwoke nke obere bụ Jason na Ridge Meadow Primary School.
N'ihe banyere nwata nwata, Chris Smalling mgbe ahụ bụ nwatakịrị nwoke dị jụụ, nke na-enweghị obi ụtọ na nke ọma. A na-emegharị ya anya mgbe niile.
Mgbe Chris nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị akwụkwọ ya, ọ gbalịrị ịme egwuregwu ndị ọzọ ma e jiri ya tụnyere ịhụnanya ya maka football. Ọ bụ ezigbo onye na-egwu egwuregwu ntụrụndụ, nkà na basketball na judo. Chris malitere ikpe ikpe, ghọọ eriri akpụkpọ anụ na agbụrụ mba ọ bụla tupu ya amalite ịgba chaa chaa.
Chris gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị, Chatham Grammar School for Boys, bụ ebe ntozu okè ya na multitask nyere ya ohere ịgwakọta football na agụmakwụkwọ. Nke a kọwaara mmalite ọrụ ya.
Ihe zuru ezu nke nrọ egwuregwu a malitere mgbe ọ dị afọ itoolu. Chris sonyeere Walderslade Boys na-eto eto eto eto. Ọ gakwuuru Lordswood na Millwall site na 2002-2004 ebe ọ na-agbanye n'ọkwá kasị elu n'oge ha na-eto eto. N'ezie, ọ bụ akụkụ dị oké mkpa nke akwụkwọ nkwado ha.
Egwuregwu na-achịkwa ihe niile Chris mere kama ọ jisiri ike ijide ọrụ. N'ezie, mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ọ na-arụ ọrụ dịka onye nlekọta na họtel. Dị ka onye nwere ọgụgụ isi dịka Chris, Chris ka na-arụ ọrụ n'ihi na nne ya enweghị ọgaranya iji kwado ya. Ọ ghọrọ onye nlekọta na họtel. [Nkọwa nke papa ya kwurịtara mgbe e mesịrị na post a]
Smalling na-amụ banyere njem na njem nleta, ọmụmụ mgbasa ozi na ọmụmụ ihe achụmnta ego n'ogologo, yana akụnụba na AS-larịị, ma nweta akara mmụta dị mma na ndị ọ na-achị.
Na 16, Smalling sonyeere na Maidstone United na-abụghị Njikọ nke ụlọ ọrụ, ọganihu na-aga n'ihu site na 18s n'okpuru ebe ndị ahụ na-eme ya, mgbe ahụkwa, ndị mbụ na - egwu egwuregwu na Ryman League.
Ọ bụ na Maidstone na ọ tolitere ruo n'àgwà ya, 6ft 4inch dị elu na n'ezie, ọmarịcha Afro nke nyere ya aha ọkpọ 'Ogwe'.
Chris mebiri ihe kachasị dị egwu dị ka onye kachasị egwu iji nweta egwuregwu kachasị mma nke egwuregwu ahụ n'asụsụ Bekee. Nke a mere ka ọ banye na ndị Midwlesbrough, Charlton, Fulham, Chelsea, Reading na Arsenal. O kpebiri ịmalite na Fulham ka o jiri nwayọọ nwayọọ na-eto eto.
Chris na mama ya mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ha nke mbụ, na-eleta ọgbakọ ndị ọzọ (Chelsea na Arsenal) iji chọpụta ebe ọ ga-aga.
Otu ụbọchị kwesịrị ntụkwasị obi, mama ya nwetara oku na-aga site na ya. O juru ya anya, olu nke Sir Alex Ferguson gwara ya ma ọ ga-ekwe ka nwa ya bịa kpọọ egwu na Ụlọ ihe nkiri nke Nrọ. N'ezie, ọ zara Ee. [Nkọwa zuru ezu nke mkparịta ụka dị na Chris Smalling Life Family].
Na 27 January 2010, Manchester United mara ọkwa na ha debara Smalling, maka ego a na-akọwaghị. A kọwara nke a dị ka nnukwu agba ọsọ nke Chris Smalling n'akụkọ ihe mere eme nke ịdị adị ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Chris Smalling Childhood Akụkọ Plus Ihe Nkọwapụta Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Sam Cooke bụ ihe ntụgharị asụsụ Bekee na nwa nwanyị 3 dị na Manchester. Cooke apụtawo n'ọtụtụ "akpa" nke ndị Britain, gụnyere FHM, FRONT, Maxim, Loaded, Zoo na Nuts na UK, nakwa na ọtụtụ mkpuchi gburugburu ụwa.
Ọ bụ ndụ ịhụnanya nke Chris Smalling. Sam Cooke bụ afọ 3 karịa Smalling. Na 2017, Chris kpebiri ka eriri eriri Sam Cooke. Nke a mere mgbe a gbasịrị ya banyere Matteo Darmian na agbamakwụkwọ Phil Jones na otu afọ ahụ.
Nwa ọhụrụ nwoke bụ Victor Lindelof nwekwara ihe mere ọ ga-eji mee ememe mgbe ọ gakwuuru enyi ya nwanyị bụ Maja Nilsson. Wayne Rooney, Luke Shaw, Phil Jones nọ n'etiti ndị na-agbakọta agbamakwụkwọ nke enyi ha na ndị otu.
Chris Smalling hụrụ Jett n'anya na Barbados, oge okpomọkụ ọ bụla na-agbaji iji nwee ezigbo oge na ịhụnanya maka ndụ ya.
Chris na-enwekarị mmasị na ski jet na ebe dịpụrụ adịpụ na Barbados.
Barbados oge ntụrụndụ malitere na 2013 okpomọkụ.
Chris Smalling Childhood Akụkọ Plus Ihe Nkọwapụta Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Chris Smalling malitere site n'obere ezinaụlọ dị ala ma ọ bụrụ na a kwụọ ụgwọ ịgba chaa chaa maka ya. Nne ya na nwanne nwoke nwoke na-eto eto na-ekere òkè ugbu a n'ọganihu ego ya.
NME: Chris Smalling dị nanị ise mgbe papa ya, bụ Lloyd, nwụrụ. Ezinụlọ ahụ si Greenwich gaa n'ụlọ dị jụụ na Chatham, Kent, bụ ebe Theresa Smalling debanyere Chris na nwanne ya nwoke bụ Jason aha na Walderslade Boys Club.
Nne: Otu di. Dika Theresa Smalling enweghị ụgbọ ala na, ọ bụ ezie na Millwall nyere aka iji ọnụ ahịa ya, ọ chọghị ka nwa ya dị afọ iri na ụma na-ejegharị na ya
Ọ bụ Theresa Smalling nne ya chịkọtara ekwentị na Chatham, ka ọ nụ onye ụkọchukwu Scott maara nke ọma. Alex Ferguson] na njedebe nke akara. Sir Alex Ferguson na-akpọ iji mesie nne ya ike Manchester Unitedihe kachasị ọhụrụ na-eme ka nwa ya, bụ Chris, lelee anya na North West.
'O juru m anya,'ka Theresa, 53 kwuru. 'Ọ bụ olu ahụ. Ọ dị ka m nọ na TV.
'Ọ na-ekwu kpọmkwem otú obi dị ya na Chris, otú ọ ga-esi lekọta ya ma na-agwa m ihe niile ha bilitere n'ebe ahụ.
'Enweghị m ike ikwere ya mgbe Chris kwuru banyere Manchester United, ọ bụ ezie na m chọrọ ka ọ bụ Arsenal. Abụ m onye na-akwado Arsenal ma Chris bụ mgbe ọ dị obere. Ma obi dị m ụtọ. '
Ebe ọ bụ na mgbe di ya nwụsịrị, Theresa anọwo na mmekọrịta ụfọdụ. Chris mgbe ekpughere ya na a twit na okwu ya ... "Mama m hụrụ Daley karịa m". NDỊ na-eto eto Daley bụ nna nna na Chris Smalling.
Chris Smalling Childhood Akụkọ Plus Ihe Nkọwapụta Eziokwu -Apology
Na Jenụwarị 2014, Chris Smalling rịọrọ ka ọ rịọ mgbaghara maka mkpebi 'echeghị eche na ya' na-eche na ọ ga-eji ejiji dịka bọmbụ na-egbu onwe ya na-akpa ọchị.
Ọ na-ewe iwe ma ọ bụrụ na e sere ya ihe osise na Arabic kaffiyeh headdress na akwa uwe agha-ya na otu ụlọ ọrụ sekit na eriri ndị dị na ya. Smalling na-ekwu na ekike bụ 'nwara egwu egwuregwu' na 'Jagerbomb' mmanya na-ewu ewu, nke a na-eche na ọ bụ ya mere ọ na-etinye karama nke Jagermeister na Red Bull ya belt dị ka grenades egosiri.
Uwe a emewo ka iwe daa n'etiti ndị lanarịrị na ndị ikwu nke ndị na-eyi ọha egwu. Na-ekwu okwu na anyanwụ nna nke nwa okorobịa nwoke nwụrụ na July 7 2005 ụjọ wakporo na London kwuru na ọ 'enweghị ike ịkatọ akwa ejiji'.
Oldham resident Graham Foulkes, 61, onye nwa ya nwoke 22 gburu David na Edgware Road site na igbu onwe onye bomber Sidique Khan kwukwara, sị: 'Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị njọ ihe m ahụtụbeghị'.
Jacqui Putnam, bụ onye lanarịrị windo Edgware na 2005, kwuru na ndị mmadụ kwesịrị 'iche echiche ugboro abụọ' tupu ha emee ka iyi egwu egwu.
Chris Smalling Childhood Akụkọ Plus Ihe Nkọwapụta Eziokwu -Personality
Chris Smalling nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Chris Smalling Ike: Ọ bụ Ọgaranya, ezigbo mma, ọchị.
Ahụhụ adịghị ike nke Small: Nkwa ndị ọzọ kariri ike ịnapụta, enweghi ndidi, ga-ekwu ihe ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nchịkwa.
Gịnị Chris Smalling amasị: Nnwere onwe, njem, nkà ihe ọmụma, ịbụ n'èzí
Nso Chris Smalling Dislikes: Ndị na-eme ihe ike, na-egbochi ha, nkọwa ndị dị na mgbidi, nkọwa
N'ịchọ ịma ihe ma dị ike, Sagittarius bụ otu n'ime ndị njem kasị ukwuu n'etiti akara zodiac niile. Echiche ha na-emeghe echiche na nkà ihe ọmụma na-akpali ha ịwagharị gburugburu ụwa ịchọ ihe ndụ pụtara.
Sagittarius na-ahụ anya, nwee nchekwube na ịnụ ọkụ n'obi, ma nwee mmasị mgbanwe. Ndị mụrụ Sagittarius na-enwe ike ịgbanwe echiche ha ka ha bụrụ ihe dị iche iche ma ha ga-eme ihe ọ bụla iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ha.
Chris Smalling Childhood Akụkọ Plus Ihe Nkọwapụta Eziokwu -Ndị Jamaicans ibe ya
Ndị na-eche nche: Jamal Blackman na David James.
agbachitere: Kyle Walker, Sol Cambell na Danny Rose
Ndị Midfielders: Jermaine Jenas, Ravel Morrison, Ashley Young, Shaun Wright-Phillips, Alex Oxlade-Chamberlain, John Barne na Aaron Lennon.
Aga n'ihu: Theo Walcott, Raheem Sterling, Andy Cole, Dwight Yorke, Daniel Sturridge, Luther Blissett na Ian Wright.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Chris Smalling's Childhood Akụkọ na akụkọ eziokwu ndị dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.